Wasiirka Cusub ee Warfaafinta oo maanta xilka la wareegay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Cusub ee Warfaafinta oo maanta xilka la wareegay
Wasiirka Cusub ee Warfaafinta oo maanta xilka la wareegay
SNTV:-Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maantay si rasmiya ula wareegay xilka wasaaradda warfaafinta oo dhawaan loo soo magacabay.
Xilwareejinta ayaa waxaa gobjoog ka ahaa Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo masuuliyiinta kale ee Wasaaradda warfaafinta.
Wasiirkii Hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele ayaa xilka ku wareejiyey Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” isagoo sheegay in Warfaafinta ay heyso Shaqo badan muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan xilkii Wasaaradda ku wareejiyo Wasiirka cusub waxaan u rajeynaa in uu shaqada meesheedii kasii wadi doono meel fiican ayaana ugu imid ugana tagaa” ayuu yiri wasiirkii hore ee warfaafinta
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay inuu halkaas kasii wadi doono shaqadii uu haayay Wasiir Geelle.
“Aad ayuu mahadsan yahay Wasiir Geelle oo aan maanta shaqadda kala wareegayo waxaana balan-qaadaa in Howsha aan meesheedii kasii wado aniga oo latashanaya asiga iyo Shaqaalaha kale ee Wasaaradda”.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda ayaa Geelle ku bogaadiyey shaqadda uu qabtay mudadii uu joogay, isaga oo Wasiirka cusubna sheegay in sababta loo soo xushay ay tahay in aqoon uu u leeyahay Warfaafinta.
Previous articleSoonku:- waa Cibaado iyo Caafimaad
Next articleCiidanka Booliska oo gacanta kusoo dhigay Askari dil ugeystay Darawal Mooto bajaaj